Crosscall Core-T4 kaniiniga dhulka oo dhan ah [Dib u eegis] | War gadget
Crosscall Core-T4 kaniiniga dhulka oo dhan ah [Falanqaynta]
Miguel Hernández | 28/03/2021 10:00 | La cusbooneysiiyay 31/03/2021 12:45 | General, Reviews
Waxaan ku laabaneynaa Actualidad Gadget oo leh waxyaabo aad jeceshahay, oo leh falanqaynta ugufiican si aad adigu go'aan uga gaarto naftaada haddii ay mudan tahay inaad iibsato alaabooyinka qaarkood, markanna waxaan diirada saareynaa suuq aad u qaas ah, qalabka aalladda u adkaysta dhammaan noocyada aagagga, ha moogaanin.
Midka cusub ayaa soo galaya miiska gorfaynta Crosscall Core-T4, oo ah kiniin aad u kakan, oo ay ka buuxaan qalab ka sarreeya dhammaantiisna si gaar ah u adkaysta. Nala soo baro waxa astaamaha ugu xiisaha badan leh iyo haddii ay mudan tahay inaad iibsato noocyada noocan ah ee diiradda saaraya iska caabbinta iyo adkeysiga, maxaad u malaynaysaa?
Sida munaasabadaha kale, waxaan go'aansanay inaan lasocno falanqeyntan cusub muuqaal aad kaheli doontid kanaalkayaga YouTube taas oo horseedeysa falanqeynta Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa sanduuqa Croscall Core-T4, iyo waliba tijaabooyin taxane ah oo gaar ah oo aan qaadno si aad fikrad uga hesho waxqabadkeeda guud ahaan, maxaa yeelay way ka fududdahay inaad indhahaaga ku aragto intii laguu sheegi lahaa. Ha ilaawin inaad rukumato oo aad noo dhaaftid Like si ay nooga caawiso inaan sii wadno koritaanka.
1 Naqshad loo maleeyay in laga hortago
3 Qeybta warbaahinta iyo kamaradaha
4 Faa'iidooyinka qalabka Crosscall iyo ismaamulka
Naqshad loo maleeyay in laga hortago
Marka la eego naqshadeynta, Croscall wuxuu leeyahay khad adag oo si dhakhso leh nooga dhigaya in aan aqoonsanno waxa ay yihiin wax soo saarkooda, xaaladdan oo ah 'Core-T4' ma yaraan doono, waxayna leedahay khadad aad loo aqoonsan karo, gaar ahaan haddii aan isbarbar dhigno alaabada kale ee kaamirada. Waxaan haynaa naqshad isku dhafan oo ay ku jiraan maaddooyinka birta ah iyo sidoo kale caag adag oo jilicsan oo na siiya difaac dheeri ah. Sidan ayuu ku helayaa Shahaadada IP68 oo leh biyo-celin la'aan ka soo horjeedka qulqulka illaa 2m soddon daqiiqo, iyo sidoo kale wadarta isku xirnaanta boorka.
Miisaanka: Gram 610
Cabirrada: 225 x 135 x 14mm
Iibso cusub Crosscall Core-T4 qiimaha ugu fiican
Dhanka hore waxaan ku leenahay Gorilla Glass 3, taas oo ina siinaysa iska caabin la aqoonsan yahay oo ah jabitaanka. Faa'iido ahaan waxaan leenahay dhisme caan ah iyo galaas gebi ahaanba fidsan. Tijaabooyinkeeda dhibcaha ayaa dammaanad qaadaya iska caabinta dhererka 1,5 mitir dabaqyada la taaban karo iyo aragti ahaan dhinacyada oo dhan. Sidoo kale, heerkulka ba'an ee u dhexeeya -25º iyo + 50º ma saameyn doono waxqabadkiisa guud. Intaas waxaa sii dheer, waxay u adkeysataa roobka iyo xitaa biyaha cusbada, iyadoo ku habboon, tusaale ahaan, in loo isticmaalo GPS ahaan doonta. Dibad ahaan, waxay umuuqataa inaysan waxba ubaahanayn, laakiin… maxay tahay waxa ay ku dhexjirto gudaha? Bal aan eegno.
Waxyaabaha sida aadka ah nooga yaabin doona ayaa ah culeyskiisa weyn Iyadoo la tixgelinayo isukeenista qalabka, laakiin la tixgelinayo inay diiradda saareyso dulqaadka, la yaab naguma lihin sidoo kale.
Marka la eego processor-ka, waxaan mar kale halkan ku aragnaa mid ka mid ah qodobada ugu xun ee ay la socoto RAM-ka, taasina waa in Crosscall ay ku sharraxdo kala-soo-galinta leh - Qualcomm Snapdragon 450, ugu yaraan, haa, iyagu sharad kuma gelin MediaTek. Xusuusta RAM kaas oo raaci doona processor-kan waa 3GB, inkasta oo aanaan hayn xog sax ah nooca xasuusta la isticmaalay.
Heerka isku xirnaanta waxaan leenahay deked DualSIM taas ayaa noo oggolaan doonta inaan u isticmaalno 'Crosscall T4' qalabka kaliya. Markaas waxaan leenahay isku xirnaan 4G LTE oo leh caymis ku filan sida ku xusan falanqayntayada. Waxaan haynaa qayb kale oo naga dhigtay qabow daran, waana taas tan aan haysanno Dhaqanka ac WiFi iyo Bluetooth 4.1.
Kaydinta 32GB oo lagu ballaarin karo microSD illaa 512GB
A-GPS, Glonass, Beidou iyo Galileo
Faa'iido ahaan, waxaan leenahay NFC sidaa darteed xitaa waxaan u isticmaali karnaa habka lacag la'aanta ah ee lacag bixinta, iyo sidoo kale deked USB-C, taas oo aynaan awoodin inaan muuqaal ka qaadno imtixaannadeenna. Dhinaceeda, waxaan leenahay samaacado dhegaha lagu rakibo oo kujira xirmada iyo deked 3,5mm jaakad
Qeybta warbaahinta iyo kamaradaha
Waxaan leenahay guddi 8 inch IPS LCD oo leh xalka WXGA, wax yar ka sarreeya HD oo aan lahayn HD buuxa, wax tixgelinaya cabbirka shaashadda way adag tahay in la fahmo. Dabcan, gudigu wuxuu bixiyaa heer dhalaalaya oo heer sare ah iyo midabyo si wanaagsan loo hagaajiyay, si kastaba ha noqotee, qaraarka ka hooseeya FHD ee aaladda sicirkan waa mid is burineysa. Dhawaaqa qaybtiisa ayaa wanaagsan marka la fiiriyo ku hadalka keliya ee ku yaal xagga hoose. Ku iibso qiimaha ugu fiican Amazon haddii ay horeba kuu qancisay.
Sida kamaradaha waxaan haysannaa 5MP xagga hore, in ka badan oo ku filan in lagu qabto wicitaan fiidiyow oo jawi caadi ah leh, iyo kamaradda dambe waxaan leenahay 13MP loogu talagalay isticmaalka goosgooska ah, waxqabadka ayaa ku hooseeya xaaladaha nalalka xun waxayna leedahay codsi fudud oo kamarad ah, waxaan kuu daynaynaa tusaalooyin qaar:
Raadi faahfaahinta sida ay ugu socoto fiidiyow> LINKAN KU XIRAN INTAGRAMKEENA
Taasi waxay tidhi, waayo-aragnimada warbaahinta badan ayaa la odhan karaa waa ku filan tahay, laakiin waxay si cad u mugdi gelisay iyadoo aan lahayn dhawaaq sitiriyo ah iyo xallinta hoose ee shaashadeeda, in kasta oo xitaa ay leedahay saamiga wanaagsan ee dhalaalka waxaa lagu raaxeysan karaa banaanka dhib la'aan.
Faa'iidooyinka qalabka Crosscall iyo ismaamulka
Xaaladdan oo kale, xirmada waxaa ka mid ah adabtarada gadaal ee 'X-Blocker adapter' oo la jaanqaadaysa ' Isku xidhka magnetic ee lahaanshaha 'Transcall'. Waxaan leenahay illaa iyo inta batteriga ee 7.000 mAh iyada oo aan lagu dhawaaqin amar degdeg ah, waxay siisaa wax ka badan ismaamul ku filan isticmaalka caadiga ah iyo xitaa ku raaxeysiga waxyaabaha ku jira warbaahinta badan oo dhib la'aan ah.
Waxaan ku nuuxnuuxsaneynaa badeecadan sidii dhammaan Crosscall oo dhan awooddeeda "waddada", Waxaad si dhib leh uga heli doontaa qalab adkaysi badan oo dhinacyo badan leh oo leh dammaanadaha ay bixiso Croscall. Si kastaba ha noqotee, sida caadiga ah ee noocan ah wax soo saarka, waxaan leenahay qalab xad dhaaf ah oo xaddidan oo tixgelinaya qiimaha, waxaan u xiisaynaa ugu yaraan xallinta FHD shaashadda, kaydinta ka weyn qiyaastii 32GB oo u muuqata mid aad u yar oo xaddidan 3GB ee xusuusta RAM.
Sidoo kale waxaa ku jira X-Strap: had iyo jeer kiniinkaaga u dhow gacantaada. Suunka garbaha, oo loogu talagalay inuu hagaajiyo kiniinka CORE-T4, ayaa sidoo kale lagu qalabeeyaa 360 ° oo wareeg ah oo loogu talagalay inuu la qabsado dhammaan adeegsiga waqtiga oo sidaas awgeed loo xaddido halista dhaawaca. Intaa waxaa sii dheer, iyada oo ay ugu mahadcelineyso suunka aan xargaha iyo suufka lahayn, waxaad si raaxo leh u xiran kartaa boorsada garabka ee X-STRAP maalintii oo dhan.
Waad iibsan kartaa Crosscall Core-T4 cusub laga bilaabo 519,90 euro boggeeda rasmiga ah, ama ka faa'iideyso sicir-dhimista lagu sameeyay Amazon halkaas oo aad ka heli karto kaliya 471 gudaha LINKAN. Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay falanqeynteena oo aad nooga tagto wixii su'aalo ah sanduuqa faallooyinka, halkaas oo aan ku faraxsanaan doono inaan kaaga jawaabno.
Qiimeynta xiddiga 3.5
€519 a €479
Ku dhejiyay: 28 Maarso 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 31 Maarso 2021
Hawlaha lagu daray
Qiimo xoogaa sarreeya
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Crosscall Core-T4 kaniiniga dhulka oo dhan ah [Falanqaynta]
Dhaqdhaqaaqa 'HyperX Pulsefire Haste', waxaan dib u eegeynaa jiirka 'ultralight game mouse'
Ciyaaraha mootooyinka ugufiican PC